ဘရတ်နဲ့ Angelina အသစ်ရုပ်ရှင်အဘို့အ S.Africa ပြောင်းရွှေ့ဖို့ - သတင်း Rule
ဘရတ်နဲ့ Angelina အသစ်ရုပ်ရှင်အဘို့အ S.Africa ပြောင်းရွှေ့ဖို့
Brad Pitt ကိုသစ်ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်စဉ်ဟောလိဝုဒ်ရဲ့တော်ဝင်စုံတွဲ Brad Pitt နဲ့အိန်ဂျလီနာဂျိုလီယခုနှစ်တောင်အာဖရိကမှရွှေ့မည်, ဒေသခံမီဒီယာသောကြာနေ့ဖော်ပြခဲ့သည်.
အဆိုပါစုံတွဲ, အဘယ်သူသည်အတူတူကလေးခြောက်ယောက်ရှိ, Sandhurst များအတွက်၏ upmarket ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိအိမ်တအိမ်ငှားပြီ $7,600 တစ်လ, ထို -Afrikaans ဘာသာစကား ရုပ်ပုံသတင်းစာနားဆင်နိုင်ပါတယ်, ပုဂ္ဂလိကငှားရမ်းစာချုပ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကိုးကားပြီး.
Brad Pitt ကိုသရုပ်ဆောင်မိတျဆှေဂျော့ခ်ျကလူနီနှင့်အတူသစ်တစ်ခုရုပ်ရှင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်စဉ်အဆိုပါစုံတွဲသည်တောင်အာဖရိကမှာအသက်ရှင်လိမ့်မည်, သတင်းစာအရသိရသည်.
အဆိုပါငှားရမ်းခစျေးနှုန်းတောင်အာဖရိကစံချိန်စံညွှန်းများကပုံမှန်မဟုတ်မြင့်မားသည်, ထိုဆင်ခြေဖုံးဂုဏ်သတ္တိများရောင်းချသော်လည်း $1 သန်းအထက်သို့.
ဒါဟာဒေသတွင်း၌ထိုစုံတွဲ၏ပထမဦးဆုံးနေထိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. သူတို့ဟာအိမ်နီးချင်းအတွက်မြို့ Swakopmund ခရီး နမီးဘီးယား တွင် 2006 ဂျိုလီသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဇီဝကလေးမွေးဖွားဘယ်မှာ, သမီးရှိလောမြို့၌ဂျိုလီ-Brad Pitt ကို.
ထိုအချိန်ကနမ်မီးဘီးယားရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပုဂ္ဂလိကသက်တော်စောင့်မျက်စိ prying မှသူတို့ကိုကာကှယျမှတင်းကျပ်စွာလုံခြုံရေးတပ်ဆင်ထား.
ဒေသခံရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရင်းမြစ် Brad Pitt ကိုရဲ့လာမည့်စီမံကိန်းကိုအတည်ပြုပေးရန်သောကြာနေ့နိုင်ခြင်းမရှိကြပေ.
21181	2 အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနကို, အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ, Brad Pitt, Brangelina, ဟောလိဝုဒ်, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်, Brad Pitt ကို, တောင်အာဖရိက
← 25 သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ် Boost စေရန်အစားအစာများ Wonder အိုဘားမား '' တကယ်သဘောကျ’ တန်းတူရေး၏ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့သတင်းစကားနှင့်အတူ →